Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote: Olona roa sisa no mivory mandini-dàlana
Depiote: Olona roa sisa no mivory mandini-dàlana
Mbola tsy nisy toa ity hatramin’ny tantaran’ny Antenimierampirenena teto Madagasikara. Depiote roa no tonga namonjy ny asam-boamieara isany mahakasika ny fandinihanana ny lalàna momba ny jono sy ny raharaham-bahiny ary ny fitaterana izay notanterahina omaly tetsy Tsimbazaza. Olona 10 na 12 isam-boamiera nefa no tokony hanao izany asa izany. Izay izany no handinika sy hanitsy ary handany ny lalàna ao amin’ity andrim-panjakana ity alohan’ny hisian’ny fanapahana miaraka. Androany alarobia faha 16 may 2018 no voalaza fa hanapaka miaraka ny depiote ireo raha ny fandaharam-potoana ao amin’ity andrim-panjakana ity no jerena.
Ny tena nahagaga anay dia ny mbola nahasahian’ilay depiote iray tamin’izy roa nivory nilaza hoe “miasa izahay fa avelao hijanona izay tsy te hanao ny asany”. Mbola nohamafisin’ity depiote avy amin’ny antoko HVM (Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay iray tamin’ireo roa nivory fa lasa eny amin’ny 13 may ny olona tokony hanao ny asa.
Efa tsy misy zavatra mandeha amin’ny laoniny intsony ao Tsimbazaza ao na hatramin’ny fandanian-dalàna aza. Aiza no hahitana fanapahan-kevitra toa izao? Tena manaonao foana izy ireo.
Manala baraka ny fanjakana Malagasy ankehitriny ny zava-misy ao Tsimbazaza ao. Tena manao zinona ny Malagasy tanteraka. Rehefa misy ny zavatra toa izao dia tokony hisy ny fepetra horaisin’ny fanjakana fa indrindra ny filohan’ny repoblika satria efa mandeha any amin’ny tsy izy intsony ny raharaha.
Inona intsony no mbola ilana ity andrim-panjakana mpanao lalàna ity. Ny depiote izay mpomba ny fanjakana tsy tonga mivory intsony. Ny mpanohitra efa tsy miraharaha ny fandaminana sy ny asa ao amin’ny Antenimieram-pirenena koa.
Amin’izao fotoana izao dia mangina toa ny toerana nivoaham-paty ao Tsimbazaza. Toa olona misaona ary toa ireny tanàna maty ireny no hita ao.
Fantatra koa fa tsy hisy intsony ny raharaha vanona ao amin’ity lapa ity. Ny mpitolona mitaky ny fialan’ny filoham-pirenena ka tsy mety hivory ao Tsimbazaza raha tsy miala ingahy Hery Rajaonarimampianina. Ny depiote mpomba fanjakana tsy mazoto hivory sy hiasa ao Tsimbazaza intsony fa toa olona efa manaiky resy ka miandry izay hiafarany fotsiny sisa. Ny vahoaka Malagasy izay mandoa ny karaman’izy ireo sy nifidy azy ireo no tena voa mafy amin’izao resaka izao.
Raha toa ka tsy hisy vahaolana intsony dia rariny sy hitsiny ny fandravana ity andrim-panjakana ity, na ny filoham-pirenena no miala amin’ny toerany araka ny fitakian’ny vahoaka fa hiteraka zava-doza eo amin’ny firenena izany.